About Us - Qingdao Esimile Machinery Co., Ltd
Qingdao Esimile Machinery Co., Ltd Kumiswa 1997. Ngemva kweminyaka ecishe ibe ngu-20 ukuthuthukiswa okuqhubekayo, inkampani iye yaba esibanzi ehola iqembu lenkampani iraba plastic umshini ensimini textile umshini ensimini. Le nkampani ine unqambothi design ithimba iqinisekisa umshini yenkampani ungaphakathi isikhundla eziphambili kakhulu eChina, abanye imishini igcina isikhundla kusengaphambili emhlabeni wonke. Le nkampani ine zonke izinhlobo ngokunemba high processing imishini ukuze amasethi ezingaphezu kuka-200.
Nhlobo esinalo izimboni ezinhlanu China ezwekazini, nge Imininingwane mechanistes abangaphezu kwamakhulu amathathu abaqeqeshwe kahle futhi abasebenzi.
Sine abasebenzi ekhethekile QC kuzo zonke workshop, Okwamanje kuzo zonke inqubo ukukhiqizwa, njalo isisebenzi QC esinyathelweni umsebenzi wakhe wokugcina. Sine abasebenzi esitebeleni kunazo futhi professional zokukhiqiza. Basuke bonke bafaneleka kokuthunyelwe kwabo.
Sine ithimba ukuthekelisa professional kunazo. Bona nje ukwazi olunye ulimi futhi inqubo namanye amazwe kahle kakhulu, kodwa nabo bazi umshini kahle, bayazi ukuthi umkhakha kahle.
Kafushane, inkampani yethu ine umlando, has phezulu ithimba ezingeni design, abasebenzi abaqeqeshwe kahle, futhi unjiniyela athandani kakhulu ozinikele yokuthengisa ithimba.
Qingdao Esimile Machinery Co., Ltd uwine udumo lwayo ngokuqaphela izinkontileka kanye uyazigcina izithembiso nangokuhlinzeka ngohlobo imishini kakhulu izinga, bese umhlabeleli professional isevisi yokukhipha nangemva inkonzo ukudayiswa. umshini yenkampani kabanzi zithunyelwa kuwo wonke umhlaba.
Thina ngobuqotho ufisa uvalwe abambisane amakhasimende global abanentshisekelo okusezingeni eliphezulu imishini izinga yethu.
Siyakwamukela Qingdao Esimile Machinery Co., Ltd.